UHarry Hole. Iminyaka engama-20 kunye nepolisa elinobuhlobo elivela kuJo Nesbø. EZIZODWA | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Iincwadi, Izaziso, Inoveli emnyama
IHARRY HOLE IKHETHEKILE
UHarry hole ubuyile. Amawakawaka abalandeli bakhe bathathe izitrato namhlanje, nge-23 kaMatshi, ukubamba Unxaniwe. Ipapashiwe la Inoveli yeshumi elinanye kuthotho lukaJo Nesbø malunga nesimilo sakhe esaziwayo kunye nenye yezona zinto zibalulekileyo kwaye zinomdla zohlobo. Nabani na obanjiswa ngumkhonzi uyayinqula kwaye nabani na ongayaziyo, uyazi, ngenxa yeencasa, imibala. Ndizibona ndinguDade oMkhulu weHarry Hole Guild yoBuqaqawuli obungunaPhakade, ke yonke le nto iyathethwa.
Kananjalo nakulo nyaka ingama-20 okoko kwapapashwa eyakhe inoveli yokuqala kwilizwe lakho lokuzalwa, Ilulwane. Apha weza nesihloko sakhe sesithathu, URobin. Kwaye siyayikhumbula loo nto kwi Oktobha sine Ukulungiswa kwefilimu de Umntu weqhwa, NguSweden uTomas Alfredson kunye noMichael Fassbender njengomntu ophambili. Iyahamba ke oku ekhethekileyo. Kubalandeli beHole kwaye, ewe, uJo Nesbø, ukuba lo Mgqibelo 25 uzakuba e Barcelona kukhenketho lwakhe lokubonisa.
Okokuqala yitsho loo nto Ndifunde yonke into nguNesbø ukongeza kuthotho lweHarry Hole. Yintoni epapashwa ngeSpanish-Uthotho lweGqirha Proctor y Izihloko zentloko-Kwaye yintoni engekhoyo, endiye ndakwazi ukuyifumana ngesiNgesi -Unyana, Igazi kwikhephu y Ilanga ezinzulwini zobusuku-. Kwaye ndibathanda bonke. Ndiyathemba ukuba ezo zihloko ziya kukhutshwa kungekudala.
2 UHarry Hole uzelwe
3 Uthotho lweHarry Hole
4 Ukuchukumisa kanye
5 UHarry nayo yonke enye into
5.1 Abalinganiswa abaqhelekileyo
6 Kwaye xa kugqityiwe
7 Ngoko ...
UJo Nesbø (I-Oslo, ngo-1960Umbhali waseNorway othembekileyo nonobisi. Isiqingatha samashumi amahlanu kaMatshi, kwiintsuku ezintandathu iya kuba ngama-57. Unamehlo acacileyo, abandayo kwaye azolileyo, kunye nobuso obunxantathu bekati e-blond kunye ne-scrawny ngubani othanda ukunyuka amatye ukoyisa uloyiko lwendawo eziphakamileyo. Ngapha koko, isenzo sokungangxoli, ukuba bendidlula nje. Kodwa naye unobuso be-psychopath, i-pimp engenabungozi efihla i-monster engenamphefumlo kunye nengqondo ye-diabolical kunye nomyili wezona zenzo zenkohlakalo.
Sonke singacinga ngenkohlakalo ngaxa lithile kuba inkohlakalo nokwenza ububi sizithatha njengomgangatho. Abo kuthi bafunda kwaye bayayithanda inoveli yolwaphulo-mthetho bayayazi ukuya kwiidigri ezingalindelwanga, nangona inyani ihlala igqithile kubuxoki. Kodwa le ndoda ibacingela kwaye ibabhala ngobugcisa obungenakulinganiswa kunye nobuchule. Kwaye kuba ndandimncinci. Esikolweni kuye kwafuneka babhale izincoko ngezihloko ezinje ngohambo lwentsimi. Ewe, kweyakhe akukho mntu wabuya ephila, ekhokelele ekubeni ootitshala bacaphuke naye.
Ngamanye amagama, le nkwenkwe yayisele ikhombe iindlela ezimnyama kakhulu, kodwa ke iya kuthi ibhola. Ukonzakala okungalindelekanga kwimigudu emadolweni kuhluthe iNorway ilivo ebeliza kuba yeyona nto ibethelelayo. Ngenxa yesikizi, wachitha iminyaka embalwa emkhosini emva koko, wayekrelekrele njengoko wayenamanani, wafunda Ulawulo lwezoShishino kunye noQoqosho ngelixa uhamba kwimisebenzi emininzi.
Ugqibile ukrebe we Bolsa. Kanye, wadlala ikatala waqamba iingoma kwiqela lakhe, Yithi derre, awathi wayila noogxa kunye nomntakwabo omncinci, owathi uOdin wambiza ekuseni kakhulu eValhalla kwiminyaka embalwa edlulileyo. Babebabi ngumsindo bade babe mbi kakhulu, babetha isandi kwaye baqala ukhenketha ilizwe lonke.
Kodwa ngenye imini umntwana, akusekho mntwana, Nditshisiwe ngokusebenza eofisini kusasa kwaye ubambe iinqwelomoya zokucula ebusuku kwindawo yokungcakaza esemsebenzini. So watsho ethatha ikhefu. Waya kude kangangoko anako, ngokuvakalayo, yile Iimpawu. Kwangoko, umhlobo opapashiweyo wayemcele ukuba abhale into ngembali yeqela lakhe kunye nempumelelo. Kodwa wayengenanjongo yokubhala nayiphi na kwezo.
UHarry Hole uzelwe
Kwaye kufanele ukuba ibinguye ijet lag okanye yajika yajongisa ezantsi xa isondela kumhlaba wekhangaru. Oko, okanye ukuba wayenethamsanqa ngokwaneleyo ukuchukumisa komoya ophefumlelweyo eziza kuwe kube kanye kobu bomi. Ke waqala ukubetha isitshixo kwaye waphinda waqalisa umkhwa wokuthwalisa uxanduva kubabalisi.
Njenge protagonist Waqulunqa umalume wakhe, ngokomgaqo, owayengenanto yakwenza naye kwaye ekugqibeleni waba yi-CHARACTER ukuba wonke umbhali aphupha ngokudala. Kwaye eyokuqala. Yamnika iminyaka engamashumi amathathu anesibini kunye nomzimba omangalisayo ukuqhuba ukusebenzisa: 194 iisentimitha mde, kunjalo blond kwaye amehlo alula isoloko igungxulwa, iindlebe ezinkulu, ibrashi yokusika iinwele kwaye, ithiyori, imbonakalo engathandekiyo. Wamnxibisa ngokungakhathali IiCowboys, iikhamera, iibhatyi okanye iingubo kunye Ugqirha Martens iibhutsi. Kwaye ngokujongeka kunye nobungakanani ucinga ukuba unerhamncwa elibi labo batshintsha indlela yendlela ukuba uyayiwela.
Igama olinike lona, Harry, wayiboleka kweyakhe umdlali webhola ekhatywayo kunye Ifani, ukuya umphathi wamapolisa walapha kwidolophu kamakhulu wakhe, apho wayehlala khona ehlotyeni njengomntwana.
Ngaloo nto uHarry Hole waxhoma biography nosapho apho umama wakhe akekho. Uyise, UOlavAkayigqibi ukoyisa ukuphulukana nenkosikazi yakhe okanye ukwamkela umsebenzi onzima wonyana wakhe. Udadewabo omncinci, sosine Isifo esiPhantsi kwaye bubuthathaka babo. Ubeke uloyiko kwi ubumnyama sele ziphakamileyo.
Wongeze uthotho lwe hits ezibalulekileyo Kunzima ukwetyisa kunye nomlinganiswa onobukrelekrele obuninzi njengobukrelekrele. UHarry unjalo unenkani, ulilolo, akonwabanga, uzele ukuphikisana, nokuba usendle kwaye ukhohlakele ngamanye amaxesha naye ngakumbi kunabanye. Kodwa kwakhona kusiwa ngaphandle kokubhukisha kubo nakwinto ayikholelwayo kwaye ivela ku a isisa kunye ezothando ukunyusa nokunyusa.
Kodwa okona kubalulekileyo, uNesbø ukwenzile -ngathethekiyo. Kwaye indlela uHarry aguquka ngayo kuthotho yinto ekufumanayo. Iploti, yesibini, njl. basebenza kuba kukho yena kwaye kwangaxeshanye bayamxhasa. Ewe, ukuba awunamakhoboka, awuyi kuyiphumelela nokuba uzama kangakanani. Oko kuyenzeka. Kodwa ukuba uye wakuzingela, akakuvumeli ukuba uhambe, nokuba angaphela enyamalala ngenye imini ngobabalo lwenkosi yakhe.
Obo buntu bujika buye Umhloli wamapolisa e-Oslo kunye notywala obungenathemba. Kwaye umntu unenkxalabo yamagosa onyanzeliso-mthetho lwalo naliphi na ilizwe (elinentsomi okanye lokwenyani) elonzakeleyo okanye elineziphene ngaphandle okanye ngaphakathi. Ke ufumene isampulu efana noHarry Hole kwaye wancama engenathemba naye.
Uthotho lweHarry Hole
Ngayo yonke le nto uNesbø ubeke i inoveli yokuqala kaHarry Hole kwelo lizwe elithile Ostreliya, njengesilumkiso sokuqala ukuba isimilo sakhe naso siza kuba ngoluhlobo. Kwambeka ukuba aleqe umbulali, wamthanda ngokunzulu njengosizi, kwaye wamenza ukuba abale ezinye zezo zinto zimbi. Kwangelo xesha kumthathe kwesi sihogo sotywala apho aya kumenza eze kwaye ahambe, nanini na efuna, ezinye iincwadi ezisithoba. Ukubhala eyokuqala yodwa kuthathe iiveki ezintlanu yayibizwa ngokuba sisihloko Ilulwane.
Inqaku leli lokuba, kum, uHarry Hole ngumlinganiswa okwazileyo ukumela Ubume bendalo obuntsonkothileyo kunye obuntsonkothileyo obunemfezeko emdeni. Ndide ndiyichaze njenge ukugqibelela kokungafezeki kwaye, ngaphezulu, kunye umlingo ukufumana ntoni ukuba iHole ibiyinyani, ubuya kufuna ukuyiwela, ubuya emva uye uzibeke kuye yeyiphi into yesithathu. Kwaye into eyakwenziwa NGOKWENZA OKWENZIWEYO (Wonke umntu uyayiqonda into ayifunayo). Oko kubizwa u buhlungu.
Oko, okanye ukumsa ekhaya ukuba umamkele kwaye ubeke i-chip kuye: le nja yeyam. Andizukuvumela utata wakhe ukuba amfake kwizinto ezininzi kangaka amashwa, iingozi kunye nokuhlukunyezwa. Yonke into iyenzeka kuHarry olihlwempu. Ukubethwa, ukurhaxwa, izithsaba-mlilo ezamngcwaba ephila, ukunqunyulwa amalungu omzimba, ukukhubazeka komzimba, ukubopha ngokupheleleyo UJim Beam, kwi-opium kunye nokuhlaselwa iziyobisi ngezihlandlo, phantse ukuxhelwa kunye nokudubula.
Oko kungathethi Yonwabele / uve ubunzima bothando / intliziyo ebuhlungu Ayimenzi aphambuke ngokungummangaliso (hayi yena, kodwa wena). Ngamanye amagama, eyona nto incinci kukuba uyasela. Kukho i-vice encinci yokunyamezela i-whiplash eninzi, nangona uHarry hamba kakubi kunokulungileyo, soloko umnika isandla angaze asichaze okanye akholelwe ukuba simfanele kwaye ... nokuba wonke umntu uyayifuna, okokuqala, ngabafundi bayo.
Inyani yile yokuba abo bayifumene ngoku banethamsanqa ukuqala Ilulwane. Mna Ndincoma ukuba ulandele ukulandelelana kwezihloko. Ukufunda kwakho kuya kuguquka njengoluhlu kunye nabalinganiswa, kwaye baya kuvuya ngakumbi. Kodwa abanye esadibana nabo kwibali lesithathu, URobin, apho kuvela khona abalinganiswa abaya kuba sisiqhelo kuthotho (ade uMnu Nesbø afune, kunjalo).
Qalisa nje URobin nantso ke ukuchukumisa okukhethekileyo. Sibona kwindawo yokuqala kunye nesiphithiphithi sokujonga emotweni apho kukho amapolisa amabini angamaqabane. Umfazi kunye nendoda ekufuneka ayilawule ngokulindela kwakhe rhoqo kunye nokuqonda okwenzekayo, naye ukungalindeleki nantoni na eyenzeka kuye ukuba ayenze.
Emva koko banokuba Iingxoxo, abanye bane uburharha ngokukodwa ekhoyo kulo lonke uthotho. Okanye kunokuba njalo ukungazinzi kodwa ukuzithemba ibonisa uHarry, yakhe umthamo ukubona ukuba uza kuyisombulula ingxaki okanye ityala ngendlela yakhe. Okanye mhlawumbi kunjalo ibinzana okanye enye yezo zandla, njengoko benditshilo. Kodwa uyazi ukuba yintoni imvakalelo ukuzifundela nokuzicingela entsha. UHarry angabelana ngeempawu namapolisa amaninzi osele uwazi. Kodwa wahlukile. Inento ENGCACILEYO endicinga ukuba ayinakuchazwa kakuhle. Okanye mhlawumbi ayisiyonto, kodwa YONKE INTO.
Kunzima kakhulu ukugqwesa kuhlobo olufana nolutsha. Zininzi izinto ezithelekiswayo, zininzi iindlela esele zihanjisiwe, uninzi lwamapolisa akhokelayo ... Kodwa ukugqiba kwam URobin, Benditshisile noHarry Hole Nditya kakhulu kunqabile. Lumka naye, ngale mpumelelo kwindlela yokwakhiwa kwayo. Iyelenqe liseklasikhi, ngaphezulu okanye ngaphantsi sele lifundiwe kwabanye abaninzi, kodwa yena intsha kraca.
4. Nemesis - 5. Inkwenkwezi kaMtyholi - 6. UMhlawuleli
Ke ufumana uthotho kwaye uyaligqiba ngaphezu kokufunda. Ukumazi ngakumbi uHarry. Ude ukhule kunye naye ukusuka kwiminyaka yakhe yamashumi amathathu ukuya kumashumi amane, Amapolisa. Kulungile, yena nazo zonke ezinye izinto eziziisekondari ezibalaseleyo Uyirhangqile. Kodwa ukusukela UMhlawuleli, uqala ukucinga ukuba incwadi elandelayo INGCONO.
Xa ugqibile Ingwe, onamaphepha akho ubusele uwatyhile phantse ungangcangcazeli, sele ubambekile kangangokuba uxhokonxa izulu nomhlaba ukuba ufumane ilulwane, Amaphela, Umbono y Amapolisa —Emva ayikapapashwa ngeSpanish. Ndizifumene kwaye ndizifunda ngesiNgesi, kodwa ngendizenzile nangesiNorway kunye nomguquleli okhohlakeleyo. Amapolisa IYAKUGQIBELA. Kunye nemvakalelo esemzimbeni wakho kwiintsuku ezininzi kamva, ugqiba kwelokuba kwisithuba nje seenyanga ezintlanu sowufundile Olunye lothotho olumnyama oluhle kakhulu ngalo lonke ixesha.
UHarry nayo yonke enye into
Ayisiyiyo kuphela ngenxa yomlinganiswa ophambili, kodwa kungenxa ye- ukuqhubela phambili kumgangatho webali kunye nomxholo. Kwindlela ubona ngayo ipolishi isimbo kunye nobuchule. Kunjalo, Ukhohlisiwe ngexesha likaMnu Nesbø, kodwa awukhathali. Yile nto uyifunayo: ukuqhubeka nokufumana ukuba i-degree ye-180 ijika ukuba uqonde kodwa ungacingi ukuba kunokwenzeka. Okanye ewe, kodwa awufuni kuyikholelwa ngaphezulu koku UHarry ukubonisa ukuba uwa izihlandlo ezilikhulu kwiimpazamo ezifanayo kunye nezinto ezoyikisayo, Elikwaziyo ukwenza okona kulungileyo kunye nokubi.
Iyakudanisa, ikwenza buhlungu, ubuthathaka bayo buyakucaphukisa, indlela ekhubeka ngayo ngokungaqondakaliyo xa inayo yonke into, ubukrelekrele, ubundlobongela, intuition, unyamezelo… Kodwa akunamsebenzi. Amandla akhe okutsala kunye nokulukuhla akwenze uwele naye kwaye uphinde uphakame naye, mxolele nangoyena mbi, yabelana ngazo zonke ezo zibetho. Eminye ayilindelwanga ngokwenyani njengokuphela kwesiphelo UMhlawuleli okanye, ngokoluvo lwam, olona loyikekayo kuthotho lonke olwenzekayo kwi Amapolisa. Kwaye akukho nto inqongopheleyo kwindawo ezoyikisayo nezothusayo kuzo zonke iincwadi.
Ukongeza, uyalumkiswa. Uyayibona isiza kuba umbambile iqhinga ukuya kuNesbø. Kodwa hayi, uyanyanzelisa ukuba ayizukwenzeka, ewe, ayizuku ... Kodwa iyenzeka. Kwaye awufuni ukuqhubeka ufunda. Uyikholelwe, ucinga ukuba YENZEKE NGOKWENENE. I (andazi nokuba incinci) intuthuzelo yile Amapolisa Uyayithatha ikhekhe ngokuqaqamba, uninzi luthando kwaye wonwabile uHarry.
Awuzange uyifunde ngoluhlobo, phantse nge ubuqhetseba kwasekuqaleni, kuhlala kukungazithembi kodwa, ngotshintsho, kunye nethemba lokuziva livakala limangalisa, nangona likoyikisa nangakumbi. Oku kuya kuhamba kakubi, ngokuqinisekileyo. Emva koko ufika esiphelweni kwaye ... Oo, oko kuphelela ... Ngapha koko, kuyamangalisa emva kwesiselo esibi kakhulu emva kwesishushu Umntu weqhwa, Ingwe y Umbono. Ngokukodwa kwi Umbono umbonile ejika waba ngoyena mntu umnyama, oyingozi kakhulu nongaphandle kolawulo lukaHarry.
7. Umntu weqhwa - 8. Ingwe - 9. Umbono
Ngapha koko, yintoni uyavelana nayo yonke into. Ndikunye noHarry kunye neqela lesibini, ukusuka kokulungileyo ukuya kokubi kakhulu.
Kukho abaphathi UBjørn Møller kunye noGunnar Hagen. Abahlobo bathanda U-Ellen, uJack Halvorsen, uBjørn Holm okanye othandekayo kwangoko Ubetha uLønnUgqirha wengqondo Ståle uAune, zitshomi ezifana nomqhubi wetekisi ophambeneyo Steinystein kunye nobuchule be UTresko, ezingazinzanga kodwa ezinesiphiwo Katrine brattt UKaja Solness, imitha yethemba kwi Ingwe.
Kukho abo bahlaziyiweyo njenge-bastard ecocekileyo UTom waaler kwaye intle kwaye yoyikeka UMikael Bellmann ngaloo mpuku yiacolyte yakhe UTulss Berntsen. Kwaye ba bulali Eyona imbi kakhulu, iimeko ezingenakwenzeka, i lolona lwaphulo-mthetho lubuhlungu okanye eyona ndawo inomtsalane. Uyabathanda BONKE Kwaye awunakukunceda
Kwaye njenge: URakel Fauke kunye nonyana wakhe u-Oleg, okanye uthando lokwenene, Ezele kukuhla nokuhla, ukuphazamiseka kunye neentlekele, kodwa zinkulu kwaye zinzulu. Ewe kodwa akukho rhoqo kunye nokulutha, ukutshabalalisa nokuzukisa ngexesha elifanayo.
Kwaye xa kugqityiwe
Ke ukugqiba kwam, kuqala ndandingenanto, emva koko ndaziva iqhina lokukhathazeka ukuze ndimqonde ngokupheleleyo uHarry. Ndiphelelwe yiJim Beam yam kwaye bendilindele i-hangover yeepic proportions, njengokuba yayinjalo. Okokugqibela, ndacela uThor ukuba anike loo Nesbø isandi. "Smash his head!" Ndatsho ngaphakathi kum ngowona mngxunya wam weHole ukhululweyo. Ke yonke into ihlala injengoko injalo, Oko kukuthi, EFEZEKILE.
Kodwa hayi, umnyango ophazamisa kakhulu ushiywe uvulekile. Ewe baninzi uHarry. Ngoku ku Unxaniwe. Kwaye imibuzo iyabuya, ukungaqiniseki ngekamva lakhe. I-cabal engakumbi. Iza kuhlala njani elixesha? Ngaba iya kuba yeyokugqibela, eyokugqibela? Ngaba umnumzana Nesbø uza kukwazi ukususa inkuku yakhe kuwo onke amaqanda egolide? Ngokuqinisekileyo akunjalo, okanye ewe? Ngapha koko. Uphantse awufuni kuyicinga kwakhona, ucinga ukuba awuyi kuyichasa. AKUSENJALO.
Kodwa ewe, siza kuyichasa kwaye sijonge phambili phambili ekufundeni eli bali litsha umxholo wevampire. Kwakhona ngegazi elininzi, iyelenqe lokujikeleza kunye namaxesha angeyiyo le nto ayibonayo, ke uNesbø. Sidibana kwakhona ne abalinganiswa abaqhelekileyo kwaye kukho ezinye entsha. Uphengululo luya kubakho kungekudala, kuba sele enamaphepha angama-23 kwaye izinto zithembisa iLOTI. Ke akukho nto iya kuhlala ezandleni zam.
... khapha umntu Nangona kukho intsomi- oko kukwenza uzive, nenyaniso eninzi, ukuphelelwa lithemba, uloyiko, ukubandezeleka, ubuqhetseba, ukumangaliswa, uloyiko, idini, ukungabikho kolawulo, ubuhlobo kunye nothando ngamandla okuthetha ukuba uHarry Hole ubumnandi obunqabileyo ukufezekiswa.
Oko kwe Ukurhintyelwa kakhulu ukuba ungaya esihogweni kunye naye kukufaneleka kwamagrafu. Kwaye uMnu. Nesbø unjalo. Kwezona zikhulu. Unombulelo ongapheliyo ngokwenza ukuba sonwabe kakhulu.
JO NESBØ IWEBHSAYITHI (ngesiNgesi)
JO NESBØ. UKHETHO LWAMAGAWULELO ku-YouTube
KuFacebook: Unamathele kuJo Nesbø.
Okungakumbi malunga neNesbø apha kwiindaba zoNcwadi: UHarry Hole ubuya ngo-2017.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » UHarry Hole. Iminyaka engama-20 kunye namapolisa akholwayo avela kuJo Nesbø. EKHETHEKILEYO
Kumfundi wobuzalwana bukaHarry Hole, eli nqaku liyamangalisa, okokuqala ngenxa yokuthanda, ukuncoma kunye nokunyaniseka ekubhalwe kuyo, kwaye okwesibini kuba ndiziva ndichongwe ngokupheleleyo. Umnumzana Nesbo kudala wandishiya ndicaphuka noHarry, enye yewaka lokugqibela lothando. Enkosi kakhulu Mariola.
Ufuna ndikuxelele ntoni ongayazi kakade? Enkosi ngengcaciso yakho.